Warbixin “Gobol kasta waxa ka jirta xaalad cunto yaraaneed oo gaadhaysa 60%” |
Warbixin “Gobol kasta waxa ka jirta xaalad cunto yaraaneed oo gaadhaysa 60%”
Wakaaladda Qurbajoogga ee wasaaradda Khaarajiga Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa soo saartay warbixin ay tafaasiil kaga bixisay baaxadda saameynta taban ee ka dhalatay abaarta baahsan ee ka jirta gobollada bariga Somaliland, waxaanay ku baaqday in dawlad iyo shicib-ba ay sii wadaan gurmadka iyo samato-bixinta dadka ku tabaaloobay abaaraha.
Wakaaladda qurbajoogu waxay ka hadleen xaaladda Biyaha, cuntadda iyo caafimaadka ee bulshadda abaareysan, sidaasna waxa lagu sheegay warbin dheer oo uu ku saxeexnaa Guddoomiyaha Wakaaladda Qurbajoogga JSl, Cabdi Cabdilaahi Xirsi (Dayaxweerar). Waxaanay warbixintiisa oo dhammaystirani u qornayd sidan:-“Waxaannu warbixintan kooban uga diyaarinnay bulshada inaanu kaga hadlo waxyaabihii aannu ku soo aragnay iyo natiijada nooga soo baxday hawlgal kormeer iyo qiimayn ahaa oo aannu Xafiis ahaan ku eegaynay saamaynta taban ee xaaladda abaartu ku yeelatay bulshada, dad iyo duunyaba gaar ahaan deegaannada gobollada bariga.
Ujeeddada kormeerkayagu waxay ku qotontay laba qodob oo kala ahaa qiimaynta abaarta iyo xoojinta qayla dhaanta gurmadka abaaraha ee gaar ahaan doorka qurbajoogga iyo qodobka labaad oo ahaa xog ogaal u noqoshada iyo qiimaynta waxqabadka iyo waxtarka qurbajoogga ee adeegyada deegaannada iyo degmooyinka qaarkood.
Waxa ka taagan dalka abaar caam ah oo xogteeda, xaaladeeda iyo warkeeda gude iyo debadba maanta laga ogyahay balse hadana waxa la yidhi “War Indhaa Dhaama “ ee maadaama ay waajibaadka xil iyo shaqada Wakaaladda ka midtahay inaanu hadba xaaladaha baahiyeed iyo dhibaatooyinka jira sida abaaraha iwm ku wargelinno qurbajoogga jaalliyadaha Somaliland kuna baraarujinno inay kala soo qaybgalaan dalkooda iyo dawladooda waxka qabashadeeda aannu si toos ah wax uga soo ogaanno, dadka la soo kulanno oo indhahayaga wax ku soo aragno.
Dhinaca kalena aannu si buuxda wax uga soo ogaanno oo xog ka soo hello heerka doorka qurbajooggu le’egyahay xagga dhismaha iyo horumarinta adeegyada bulshada ee aas’aasiga ah ee deegaannada iyo degmooyinka gobolladaas oo ay ku jireen meelo aannu hore wax uga ogayn iyo dhinaca kale xaaladda guud ee adeegyada bulshooyinka deegaannadaas miyiga u badani siday yihiin iyo meelaha ugu daran haddii ay tahay waxbarashada, caafimaadka iwm ee ay tahay inaanu ku wacyigelinno jaalliyadaha qurbajoogga guud.
Haddii aan ku horreeyo xagga abaarta, waxa aniga guddoomiye ahaan iyo team aan hoggaaminayay ku soo marray kormeerkan oo aannu ka bilawnay dhulka gubanka ah ee gobollada Saaxil iyo Sanaag inka badan 80 deegaan oo ku kala yaalla 15 degmo iyo 7 gobol markaan ku daro Gobolka Maroodijeex oo aannu ka soo marray degmada Sabawanaag. Waxannu soo marray deegaanno ku yaalla Degmooyinka Xagal, Laasciidle, Huluul, Ceel Afweyn, Gar-adag, Ypgoori, Adhicadeeya, Caynabo, Qoryaale, Odweyne, Ballidhiig, Duruqsi, Xaaji Saalax, Raydab Khaatumo iyo Sabawanaag oo ku kala yaalla gobollada Saaxil, Sanaag, Sool, Togdheer, Saraar, Daad Madheeh iyo Maroodijeex.
Saamaynta guud ee abaarta:
Waxa ka taagan dhammaan dhulkan abaartan caamka ah ee intiisa badan dalku ka simanyahay xagga xaalufka iyo calafkii xoolaha, laf dhabka, xagga dhimashada xoolaha adhi iyo ishinba oo inta badan gaadiidkii la raranayay ugu dhimasho horreeyeen, xagga biyo la’aanta iyo raashin yaraantaba, xagga xanuunada xoolaha. Waxay usii kala darantahay abaartani sida dhulku usii kala bariyeeyo oo tusaale gobolka Sanaag ayaan odhan karaa waa ugu sii darayahay kuwan kalena waxba ma dhammaan.
Waxannu la kulannay guddiyada bulshada, odayaasha iyo guud ahaan dadka hormoodka u ah deegaankasta iyo wargaleenka iyo xoola dhaqatada lafteeda waxaanay noo xaqiijiyeen in xaaladda xooluhu isugu jiraan wax baxayba, wax aan soconayn oo aan biyaha gaadhayn oo fadhiya iyo wax weli soconaya balse aan cad iyo caano midna lahayn oo aan iib galayn. Dhammaan deegaannada iyo degmooyinka aan soo marray ee gobollada saaxil, Sanaag, Togdheer, Saraar, Sool, Daad Madheedh iyo Maroodijeexba waxay bulshada ku dhaqani ahaayeen dad 100% dhaqaalahooda iyo noloshoodu ku xidhantahay xoolaha nool iyo waxsoosaarka xoolaha haddii ay qashaan, maalaan iyo iibsadaanba oo aan waxsoosaar kalena lahayn. Sidaa darteed, markii abaartani ku habsatay ee xoolihi sidan noqdeen, waad qiyaasi kartaa xaaladda dadkuna siday noqonayso iyo warwarka ay leedahay. Waxay u baxeen xooluhu inta u dhaxaysa 30% illaa 80% iyo weliba ka badan. Waxannu aragnay ninka 100 neef oo adhi ah oo ka sii haya laba neef, mid 200 ama 300 ama 400 lahaa oo kala badh ama seddex dalool meel iyo ka sii yarba meelaha qaar sii haya waxa soconaya. Waxay xaaladdu markaas taagantahay badbaadinta dadka oo kaliya. Waxa meelaha qaar gaar ahaan gubanka dhintay oo abaartu dishay xawayaankii kale ee duur joogta ahaa sida deeradii, daayeerkii iwm, waxanay dadka ceelasha ka cabbaa ka cabsi ka qabeen in biyuhu sumoobaan.
Dhibaatooyinka abaarta ka dhashay ee aanay dadkii xoolaha ku noolaa ka helayn cad iyo caano, cuntaduna ku yartahay waxa dadka ka muuqata diif badan. Waxay nooga warbixiyeen koox caafimaad oo ka socotay Ceerigaabo oo iyana kormeer xagga caafimaadka ah waday in 550 carruur ah oo ay eegeen heerkooda nafaqo darro inay 160% ahaayeen qaar xaaladoodu halis tahay (Severe malnutrition), inta kalena badankoodu ku xigeen.
Waxay ku soo kordhisay abaartu dadka hawl dheeraad ah iyo kharash oo dadku kala qaarmay oo meelo badan oo gobolladaas bariga siiba Sanaag reer waliba u qaybsamay qayb xoolaha wixii nool ee soconaya ula hayaamay meel fog iyo maatidii oo meel laga yaabo inaanay biyana u dhawayn lagaga tegay. Meelaha qaar dadka caynkaas ah ee maatida ah waxa la isugu ururiyay goobo sida degmooyinka Laasciidle, Huluul, Ceel-Afweyn, Gar-adag, Adhicadeeya iyo deegaanno kale oo gudiyada iyo odayaasha deegaannada ayaa arrintaas xilka saaray. Waxa si toos ah deegaannada qaarkood lagu soo dul ururiyay boqolaal qoys oo tusaale illaa 600 qoys ayaa Huluul iyo Fadhigaab lagu ururiyay kuwaas oo toos ugu barakacay abaartan.
Degmooyinka badankooda waxa ku soo kordhay dad jihooyin kala duwan kaga soo hayaamay abaarta darteed halka kuwii deganaana qaarkood ama badankoodu meelo kale u hayameen ama waydaarteen kuwa ku soo guuray. Waxay dadku ku magacaabayeen abaartan inay tahay Abaartii Isu Guurka oo tusaale qofkii Sool joogay u hayaamay Sanaag ama Saaxil, oo kii Saaxil u hayaamay Sool ama Awdal oo kii Sanaag u yaamay Gabiley. Deegaannada ugu badan ee dadka xoola dhaqatada ahi kuu soo hayaameen waxay u badan yihiin gobolka Daad Madheedh, degmooyinka Qoryaale, Ballidhiig, Huluul iyo Ceel-Afweyn.
Xaaladda biyo la’aanta:
Helitaanka biyaha waxa ugu daran deegaannada ka cabbi jiray baraagta oo haatan 90% iyo/ama 99% madhan meelaha qaar deegaannada hoos yimaada degmooyinka gobolka Daad Madheedh, Saraar, Sool, Sanaag iyo galbeedka Saaxilba, iyo deegaannada ka cabbi jiray ceel biyoodka la maaxiyo oo abaartu gudhisay gaar ahaan deegaannada gubanka. Waxay noo xaqiijiyeen gudiyada abaaraha ee heer degmo meelaha qaar sida Durruqsi inay biyo yaraanta awgeed u qoondeeyeen qoyskiiba hal sharikaan maalintii, xoolaha wixii soo gaadhi karana aanay waxba u hayn biyo oo haddii dhawr booyadood loogu shubo barkad ama laba meel 1,000 qoys deggantahay aanu qoysku wax intaas ka badan heli karin.
Dhulka Gubanka u dhexeeya Saaxil iyo Sanaag oo isagu kaga duwan kuwa kale xagga waddo la’aanta iyo adeeg xumada, xaaladda abaartuna aad ugu sii darantahay, waxa ka dhacday in meelaha qaarkood dadku ka cabbaan biyo qadhaadh oo aan ku habboonayn isticmaalka aadamaha taasoo noo sheegeen dadku in laga qaaday xanuuno oo carruurta iyo dad waaweyniba ku shubmeen.
Gurmadka heer gobol iyo heer qaranba:
Sida ay nooga warbixiyeen dadka deegaannada aannu soo marray ee gobolkasta waxa ka jirta xaalad cunto yaraaneed. Illaa 60% ayaa deegaannadaas 80-ka ka badan ee aannu soo marray la gaadhsiiyay waxoogaa raashin ah mar 1-2 laba balse aanay wax ka badan kiilooyo u helin qoysasku, isla markaana aanay boqolkiiba inta badan wada helin ama deegaannada qaarkood waxba gaadhin. Deegaannada dadku u badan yihiin xoola dhaqatada ku baahsan kaymaha iyo buurahaha sida gobolka Daad Madheedh iyo Sanaag waxay gudiyada gurmadka abaaraha ama gobollada iyo degmooyinku ka warwarsanaayeen sida loo meel la isugu ururin karo dadkaas filqan ee xoola dhaqatada ah taasoo uga baahan in gacan laga siiyo
Waxa jiray cabashooyin deegaannada badankoodu u jeedinayaan gudiyada gurmadka ee heerarka kala hooseeya sida heer degmo iyo heer gobolba. Waxay ka mid ahaa hadallada qaarkood iyo talooyinka ay soo jeedinayeen “Qof baahan wax looguma dhiibo qof baahan.” Gudiyada heer gobo lee abaaraha gaar ahaan kuwaan la kulannay sida Daad Madheeh ayaa iyana dhinacooda ka warwarsanaa in qayla dhaanta abaarta ee tusaale xagga biyaha iyo cuntaduba deegaankasta ka soo yeedhayso balse aanay iyaguna wax dabooli kara gacanta ku haynin.
Dhinaca kale, guud ahaan gudiyada maamullada degmooyinka, gudiyada abaaraha heer degmo ama gobol, odayaasha iyo bulshada deegaannada aannu soo marray oo dhami waxay aad u dhaliilayeen ama u qawad sanaayeen doorka qurbajoogga ee gurmadka abaaraha deegaannada iyo degmooyinka oo weli maqan.
Doorka qurbajoogga ee dhismaha iyo horumarinta adeegyada bulshada:
Deegaannada iyo degmooyinka aannu soo marray waxa doorka qurbajoogga ee xagga dhismaha iyo horumarinta adeegyada bulshadu ugu liitaa dhulka gubanka Saaxil iyo Sanaag iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo aanay saamayn togan ah ku lahayn dhammaan adeegyada aas’aasiga ah ee bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iwm. Haseyeeshee, waxa jira deegaanno ama degmooyin ay qurbajooggu waxqabado dhaxalgal ah ka sameeyeen gaar ahaan xagga waxbarashada iyo caafimaadkaba meelaha qaar oo ay ka midyihiin degmooyinka Qoryaale, Ballidhiig, Xaaji Saalax iyo Adhicadeeye ee gobollada Togdheer, Daad Madheedh iyo Sool iyo degmada Sabawaang ee gobolka Maroodijeex. Waxaannu ku haynnaa xogta qurbajoog iyana mashaariic la mid ah ka hirgeliyay deegaanno ka tirsan gobollada Saaxil, Maroodijeex iyo Awdalba.
Dabcan iyana waan booqanaynaa kormeerkayaga labaad, waxanay dhammaan waxqabadkaas qurbajooggu ka muuqan doonaan warbixin gaar ah oo Wakaaladdu ka soo saarayso arrintaas. Waxa bogaadin mudan shakhsiyaad qurbajoog ah oo dhawr deegaan gaadhsiiyay gurmad raashin sida Dhuur Cillaan, Fadhigaab iyo deegaan Durruqsi ka tirsan, waana mid ku dayasho mudan is xilqaanka iyo dadaalka shakhsiyaadkaasi haddii ay jeebkooda tahay iyo haddii ay dad iyo meelo kale ka soo ururiyeenba.
Xaaladda Caafimaadka iyo Dadka:
Deegaannada aannu soo marray qaarkood gaar ahaan dhulka gubanka ah ku yaalla ayaa nooga warbixiyay inay dad u badan dhallaanka iyo hooyada xanuuno ku yimaadeen oo carruurtu uu ka midyahay shuban carruurta ku dhacay markii biyo qadhaadh ama adag la siiyay. Waxay deegaanno badan oo gubanka Saaxil iyo Sanaag iyo deegaanno badan oo hoos yimaada Ceel Afwayn, Gar-adag, Ballidhiig, Durruqsi, Xaaji Saalax iyo degmooyin kale oo ka tirsan Daad Madheedh, Saraar iyo Soolba cabashooyin ka muujiyeen adeegyada caafimaad aanay hore u lahayn.
Wakaaladda Qurbajooggfu waxay ugu baaqaysaa hay’adaha dawladda gaar ahaan Wasaaradda Caafimaadka in fiiro gaar ah loo yeesho xaaladda xagga caafimaadka ee deegaannada abaartu ka jirto. Abaaraha waxa ka dhasha xanuuno ay usoo dhacaan dadka iyo xooluhuba cunto yaraanta, biyo xumaanta, nafaqqo la’aanta iyo awood darrada awgeed, waxana jirta in degmooyinka qaarkood marka horeba aad uga liitaan xagga adeegyada aas’aasiga ah ee bulshada sida caafimaadka oo tusaale degmada Xagal uu 24 tuulo ama deegaan ka dhexeeyo hal adeeg caafimaad, degmada Huluul uu 13 tuulo ka dhexeeyo hal adeeg oo degmooyinka gobollada Sanaag, Daad Madheeh,Togdheer iyo Soolba ku yaryahay adeeggani. Waxa markaa lagama maarmaan ah in Wasaaradda Caafimaadka, maamullada gobollada, dawlad iyo dadweynaba aad loogu feejignaado dadka inta xaaladan abaarta lagu jiro. Xarumaha degmooyinka badankooda waxay xanaanooyinka xarumaha degmooyinka ku yaallaa leeyihiin baabuur dhoodiyaal ah (Ambulances) balse dhulku aad buu u ballaadhanyahay. Waxannu soo jeedinaynaa in lagu talo galo kooxo (Mobile health teams) caafimaad oo ku wareega deegaannada ugu daran si loola socdo oo loo gargaaro dadka xanuunsanaya, dumarka umulaya, xaaladaha nafaqqo darrada iwm. Waxannu u gudbin doonnaa jaalliyadaha warbixin gaar ah oo aannu ugu sheegno heerka adeegyada bulshada xagga caafimaadka, waxbarashada iwm ee degmooyinkaas aannu soo marray si ay ogaadaan oo ku tushadaan inay door ka qaataan dhismaha adeegyada bulshada.
Kollay xanuunka iyo gaajadu way wada socdaan oo marka xooluhu gaajoodaan ee wayd noqdaan waxa khasab in xanuunna ku yimaado balse waxay dadka badankoodu ka warbixiyeen inay jiraan xanuuno oo u weheliya xoolaha xaalufka abaarta oo tusaale geelu isagoo hililb leh fadhiisanayo.
Gunaanadka Warbixintan kooban:
Gebogebadii, waxaan marka hore Ilaahay ka baryayaa inuu innaga jabiyo abaartan oo raxmadiisa ballaadhan innoo shubo.
Dawladda Somaliland iyo dalkeennu itaalkasta oo uu leeyahay hadana dadaalka xukuumadda, goleyaasha kale, axsaabta, guddiyada gurmadka abaaraha iyo guud ahaan ee xagga gurmadka abaaraha jira ee biyo dhaanka iyo quutal daruuriga kaleba waa mid socda oo aanay hayn la’aan mooyaane marnaba hagrasho ka muuqan. Waxa xusid mudan mashaariicda qodista riigaga biyaha ee dawladdu ka bilawday deegaannada abaaraysan qaarkood hadda laga cabbayo qaarna lagu rajo weynyahay oo aannu soo aragnay.
Haseyeeshee, maaha arrin la dhayalsan karo xadiga iyo baaxadda dalka iyo mujtamaca ku baahsan ee maanta abaartani haleeshay haddii yihiin gobollada bariga iyo haddii ay guud ahaan dalka tahayba taasina waa mid innooga baahan dawlad iyo shacab, qurbejooge iyo qaran jooge, ganacsade iyo shaqaale, heerkasta, haynkasta iyo meelkasta aan daymo weyn u yeelanno arrintan iyo sidii aan uga badbaadin lahayn dadkeenna gaajo iyo harraad Ilaahayna aan kaashanno oo barinno gurmadkiisa waafiga ah ee lagaga bixi karo xaaladda maanta taagan.
Waxaan ugu baaqayaa qurbajoogga jaalliyadaha Somaliland meel kasta oo ay joogaan inay xoojiyaan doorkooda waxtarka leh oo si weyn maanta u muujiyaan dareenka wadaniyadda, walaalnimada, wadajirka iyo waxqabadka lahaa ee waligood caanka ku ahaayeen inay dadkooda hiil iyo hooba la soo garab istaagaan oo si waafi ah uga soo qaybgalaan gurmaka abaaraha lagu badbaadinayo nolosha dadkeenna abaaraysan inaanay u dhiman gaajo iyo harraad. WA BILLAAHI TAWFIIQ.”